Naya Bikalpa | एउटै व्यक्तिकाे स्वाब परिक्षण रिपोर्ट कहिले नेगेटिभ कहिले पाेजेटिभ - Naya Bikalpa एउटै व्यक्तिकाे स्वाब परिक्षण रिपोर्ट कहिले नेगेटिभ कहिले पाेजेटिभ - Naya Bikalpa
एउटै व्यक्तिकाे स्वाब परिक्षण रिपोर्ट कहिले नेगेटिभ कहिले पाेजेटिभ
निजी अस्पतालले परिक्षण गरेकाे पिसिआर रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे कब्जामा!
प्रकाशित मिती: २०७७ भाद्र १८, १६: ४३: १३
काठमाडौं–तपाई के सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कोरोनाको (पिसिआर) परिक्षण गदैं हुनुहुन्छ ?
त्यसो भए परिक्षण चै गर्नु होला तर रिपोर्टको भर नपर्नु नी ! तपाई नयाँ झमेलामा फस्नुहोला नी ! स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले तपाईको परिक्षण नेगेटिभ भने पनि केही बेरमै पोजेटिभ हाे भन्नसक्छ ।
सरकारी संस्थाको भर गरेर पिसिआर परिक्षण गरेका नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुखसहित एक सय वढी सर्वसाधारण यतिवेला पिसिअार रिपाेर्टकाे झमेला र तनावमा छन् ।
गत शुक्रबार नागार्जुन नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विज्ञ टोलिबाट ९० जनाको पिसिआर परिक्षण गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सहयोगीको परिक्षण गरियो । आईतवार दिउँसो पौने दुइ बजे प्रयोगशालाले परिक्षण गरिएका सबैजनाकाे रिपोर्ट नेगेटिभ पठायो ।
कोरोना महामारीको विचमा खटिएका उनिहरु संक्रमित नदेखिएछि नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले नगरपालिकाकाे ६ नम्वर वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकी सहित सबैले खुसी साटासाट गरे ।
उनिहरुको खुसी लामो समय टिक्न सकेन । मंगलबार बेलुका ६ बजे प्रयोगशालाले वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढाथोकी लगायत केही ब्याक्तिको पिसिआर रिपोर्ट पुनः पोजेटिभ भएकाे पठायो र प्रयोगशालाले फोनबाट समेत पोजेटिभ भएको जानकारी गरायो।
नयाँ विकल्पसंग कुरा गदैं नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर बस्नेत गुनासो गर्छन “सरकारी प्रयोगशालामा पिसिआर परिक्षण विश्वसनिय ठानेर गरियो । तर ३० घन्टामा एउटै स्वावबाट दुईवटा रिपोर्ट आएपछि हामीमा त्राश बढेको छ । काठमाडौंका हामी जनप्रतिनिधिको त यस्तो अवस्था छ भने दुर दराजका जनताको अवस्था के होला ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?”
गत आईतबार प्रयोगशालाले पठाएको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ दिएपछि सोमबार विहान नगरपालिकाकाे वडा नम्वर ६ मा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । संक्रमणका बेला रगत अभाव नहोस भनेर गरिएको सो कार्यक्रममा एकसय बढी सहभागी थिए ।
उक्त कार्यक्रममा जाँदा मेयर बस्तेत वडाध्यक्ष बुढाथोकीको मोटरसाईकलमा बसेर गए । उपमेयर शुशिला अधिकारी नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणी आचार्य, प्रेस युनियनका पूर्वमहासचिव शिव लम्साल, सचिव खिला कार्की, शिक्षक दुर्गा गाैतम लगायत सहभागी थिए ।
निजी अस्पतालको रिपोर्ट मन्त्रालयको कब्जामा
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशालाको लापरवार्हीका कारण दुईखाले रिपोर्ट आएपछि तनावमा परेका प्रमुख बस्नेत र वडाध्यक्ष बुढाथोकीले निजी अस्पतालमा पुनः परिक्षण गरे तर त्यो रिपोर्ट मन्त्रालयले कब्जामा लिएर पीडितलाई गुमराहमा राख्दै झन पीडा थप्ने काम गरेको छ ।
नगरप्रमुख बस्नेत र बुढाथोकीले फास्ट ट्रयाकबाट परिक्षण गर्ने र ६ घन्टामै रिपोर्ट दिने दावी गर्ने सानेपास्थित स्टार अस्पतालमा पुनः परिक्षण गराए । ६ घन्टा भित्र दिनुपर्ने रिपोर्ट स्टार अस्पतालले दोस्रो दिनसम्म पनि दिएको छैन् ।
यसबारे नयाँ विकल्पले स्टार अस्पतालमा बझ्दा उक्त रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाई सकिएको जानकारी दियाे । बुढाथोकीको सम्पर्कमा रहेका मेयर बस्नेतमा यतिवेला स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । सामान्य ज्वरो, रुवाखोकी र शरिर दुख्ने समस्या देखिएपछि बस्नेत घरमा आराम गरिरहेका छन् ।
मेयर बस्नेत प्रश्न गर्छन “नत स्टार अस्पतालले रिपोर्ट दिन्छ ? नत मन्त्रालयले नै यसवारे जानकारी दिन्छ । निजी अस्पतालमा पैसा तिरेर गरेको परिक्षणको रिपोर्ट लिन मन्त्रालय कसरी जाने ? यस्तो पीडा सहेर कसरी बस्नु ? ”
सानेपास्थित स्टार अस्पतालका अनुसार कुनैपनि ब्यात्तिको स्वाव रिपोर्ट ६ देखि बढिमा १२ घन्टा भित्र अस्पतालले उपलब्ध गराउने गरेको छ । स्वाचालित मेसिनबाट समयमै विश्वसनिय रिपोर्ट दिने दावी गरेको स्टार अस्पतालले कोरोना पोजेटिभ देखिएमा भने सिधै ब्यात्तिलाई रिपोर्ट दिन नमिल्ने बताउँछ ।
अस्पतालका मनिकुलर प्रयोगशाला प्रमुख गोविन्द पौडेलले कोरोना संक्रमण (पिसिआर) रिपोर्ट पोजेटिभ आएमा सिधै रिपोर्ट दिन नमिल्ने बताउँछन् । पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोजेटिभको रिपोर्ट गोप्य रुपमा मन्त्रालय पठाउनु पर्ने निर्देशिका नै जारी गरेकोले संक्रमित ब्याक्तिले रिपोर्ट ढिलो पाउने गरेको छ ।
२०७७ भाद्र १८, १६: ४३: १३